Centigrade (2020) | MM Movie Store
2020 ထှကျပါ Drama/ Thriller အမြိုးအစားဖွဈပွီး ထူးခွားတာကတဈကားလုံး cast ၂ ယောကျပဲပါပါတယျ…ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ စာရေးဆရာမ နာအိုမီနဲ့ သူ့ယောကျြားဟာစာအုပျလကျမှတျထိုးပှဲအတှကျ နျောဝေးနိုငျငံသို့သှားရငျး နှငျးမုနျတိုငျးတဈခုကွောငျ့ ကားထဲမှာ ပိတျမိသှားပါတော့တယျ…
ပိုဆိုးတာက နာအိုမီမှာ ကိုယျလေးလကျဝနျကွီးနဲ့ပါတဈရကျပွီးတဈရကျ ကုနျလှနျပွီး ပါလာတဲ့စားစရာတှေ ကုနျခါနီးလာတဲ့အခါဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာ ရှုစားပေးကွပါဦး။ ဒီဇာတျကားဟာ အတျောလေးကိုစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးပွီး အတျောကွညျ့လို့ကောငျးပါတယျ . Silent Movies အမြိုးအစားလို့လညျး ပွောလို့ရမယျထငျပါတယျ။
2020 ထွက်ပါ Drama/ Thriller အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ထူးခြားတာကတစ်ကားလုံး cast ၂ ယောက်ပဲပါပါတယ်…ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စာရေးဆရာမ နာအိုမီနဲ့ သူ့ယောက်ျားဟာစာအုပ်လက်မှတ်ထိုးပွဲအတွက် နော်ဝေးနိုင်ငံသို့သွားရင်း နှင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုကြောင့် ကားထဲမှာ ပိတ်မိသွားပါတော့တယ်…
ပိုဆိုးတာက နာအိုမီမှာ ကိုယ်လေးလက်ဝန်ကြီးနဲ့ပါတစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ကုန်လွန်ပြီး ပါလာတဲ့စားစရာတွေ ကုန်ခါနီးလာတဲ့အခါဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ရှုစားပေးကြပါဦး။ ဒီဇာတ်ကားဟာ အတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး အတော်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် . Silent Movies အမျိုးအစားလို့လည်း ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။